ရန်ကုန်တွင်ကပြမည့် စောမဲကျီပြဇာတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကံဒိုင်းတိုက်နယ်အသင်း (ရန်ကုန်)က ကြေညာချက်ထုတ် | ngalone
← လက်ဖြောင့်သေနတ်သမား လက်ချက်ဖြင့် တပ်ရင်းမှူးကျဆုံးဟု အစိုးရတပ် ထုတ်ပြန်
မောင်တောတွင် ရွာသို့ ပြန်လာစဉ် လမ်းတွင် ပျောက်ဆုံးနေသော ရခိုင်လူငယ် ၃ ဦးအား ကူညီရှာဖွယ်ပေးရန် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မိခင်ဖြစ်သူက တောင်းဆို →
ရန်ကုန်တွင်ကပြမည့် စောမဲကျီပြဇာတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကံဒိုင်းတိုက်နယ်အသင်း (ရန်ကုန်)က ကြေညာချက်ထုတ်
စစ်တွေ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၁
ရခိုင်အမျိုးသမီးအသင်း (ရန်ကုန်)၏ နှစ် (၆ဝ)ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပမည့် ပတ္တမမြားဒေဝီ စောမဲကျီသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်ပြဇာတ်တွင် သမိုင်းအမှားတချို့ပါဝင်နေကြောင်း ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကံဒိုင်းတိုက်နယ်အသင်း (ရန်ကုန်)က ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့က ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်မှန်ပြဇာတ်အား တင်ဆက်ကပြသည့်အခါ သမိုင်းအမှန်၊ ဖြစ်ရပ်အမှန်၊ နေရာဒေသအမှန်၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်အမှန်နှင့် မင်းဗာဘုရင်မင်းမြတ်အမည်နာမကိုသာထည့်သွင်းတင်ဆက်ရန် ကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းတောင်းဆိုထားသည်။
အဆိုပါပြဇာတ်ကို ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့၊ ညနေ (၇)နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်ရှိ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံတွင်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဖြစ်သော အကယ်ဒမီ နေတိုး၊ ရခိုင်သူ ရတနာမိုင်၊ အကယ်ဒမီ အောင်လွင်နှင့် အကယ်ဒမီ ရန်အောင်တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
This entry was posted in သတင်း and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.
Join 55,995 other followers